DOWNLOAD Hawker Siddeley Trident FS2004
Hawker Siddeley Trident 2 sy 3. Misy amin'ny 6 textures, avo lenta, faran'izay fiaramanidina amin'ny fihetsik'ireo sary mihetsika. Feno tontonana + VC.
Hawker-Siddeley Trident ny voromby dia fohy / antonony-fipetrany trijet natao avy De Havilland ao amin'ny 1950s, ary nanorina ny Hawker-Siddeley ao amin'ny 1960s, taorian'ny De Havilland absorption avy amin'ny vondrona farany.
Natao British Airways Eoropa (Bea), dia namidy tamin'ny kely dia be ny orinasa hafa, ihany 117 fiaramanidina vokatra. Izany dia zava-dehibe ny fiaramanidina Eoropa fifamoivoizana, fa ny vola lany avo voatery miasa ny fiaramanidina ho fohy ny fiainana. Taorian'ny Fampitambarana Bea sy BOAC amin'ny British Airways, dia nosoloina Trident andian-Boeing 737 sy Boeing 757 1980s tany am-boalohany. Trident na izany aza mbola amin'ny fanompoana amin'ny Air Shina hatramin'ny tapaky ny 1990s.
Ny Trident no voalohany fiaramanidina ho tanteraka ara-barotra fomba mandeha ho azy sy ny fipetrahana. (Wikipedia)
David Maltby Website